Fampandriana tany any Betsiboka : Olona 11 voasambotry ny miaramila, tao anatin’ny roa herinandro lasa. – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → avril → 5 → Fampandriana tany any Betsiboka : Olona 11 voasambotry ny miaramila, tao anatin’ny roa herinandro lasa.
Fantatra fa nahatratra sy nahasambotra olona ahiana ho olon-dratsy, manodidina ny 11 eo, ny andiana miaramila manao fisafoana eto Maevatanàna an-tampon-tanàna, hatramin’izay roa herinandro niasan’izy ireo izay. Mpanao fanafihana, mpivarotra rongony, mpamaky trano sy lehiben’ny Zazamainty ny ankamaroan’ireo voasambotra ireo. Misambotra ihany no ataon’ireo miaramila mpanao fisafoana. Ny Zandary sy ny polisim-pirenena kosa no misahana ny fanadihadiana sy ny famotorana. Misy amin’izy ireny no efa natolotra ny fitsarana, ka nidoboka am-ponja vonjimaika. Efa ho tapa-bolana mahery teo no nisian’ireny andina miaramila manao fanamiana sy mitondra fitaovam-piadiana mivezivezy eny an-dalam-be sy ny any anelakelan-trano eto Maevatanàna. « Misy mitondra basy, « kalachnikov » ireo miaramila, izay azony ampiasaina avy hatrany amin’ny fotoan’ny toedraraha ilana izany. Matetika miaramila enina na fito no indray milahatra miara-dalana. Voalaza, fa tsy eto amin’ny renivohitr’i Betsiboka ihany no nametrahana an’ireo mpitandro filaminana ireo fa misy ihany koa ny faritra Tsaratanàna, Ambatoboeny, sy ny ato amin’ny disitrikan’i Maevatanàna, hoy Jeneraly Razafitombo Ely, Chef de Brigade ZRPS Delta. Anisan’ny tranga faramparany nahatrarana olon-dratsy antsoina hoe: Sedera; izay ela nokarohina, ka saron’ireo miaramila, ary teo ihany koa ny nahavoasambotra ireo lehiben’ny Zazamainty roa, efa natolotra ny Zandary moa izy ireo, ary samy nidoboka am-ponja rehefa tonga teny amin’ny fampanoavana. « Entanina ny olona lasibatry ny fanafihana, mba hametraka fitoriana eny amin’ny miaramila mpampandry tany. Toy izany ihany koa, ohatra, ny tompon’andraikitra eny anivon’ny fokontany mba hanenjehana an’ireo olon-dratsy eny amin’ny fitoerany, hoy ny Jeneraly Razafitombo Ely.
Liliane Averty 7 avril 2019 at 9 h 02 min · Edit
Azo atao tsara ny fahandriampahalemana mihoatra ny 100 isa-njanto amin’ny alalan’ny famoronana asa ho an’ny olona rehetra indrindra ny tanora . Fandefasana ny Ankizy obligatoire any an-tsekoly au moins 16 taona .
Rolland Edouard Firmin 5 avril 2019 at 14 h 25 min · Edit
Tokony ho tohizana hatrany ambany Ravi-kazo lavitra andrina any izao fa mba hety hihena any aminy 75 %!raha kely indrindra ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagascar na tsy hihena 100 % aza,mampahery an’ireo miaramila sy tompon’andraikitriny filaminana hatrany